Umatshini wokukhupha i-sisal fiber
Umatshini wokukhupha ifayibha isisetyenziselwa ukukhonkxa iintlobo zefayibha kwisis,ramie, jute, kenaf,hemp,isiqu sebhanana,amagqabi e-pineapple njl .umatshini wokukhupha isalal unokuqinisekisa ukuvelisa ukhuseleko,Ukucoca iflakisi ecocekileyo kwaye kungaphuli ifilakisi yefilakisi.Ukusebenza kwesichumisi esisebenza kakuhle ngesikhundla esiphezulu, woyisa umsebenzi wesandla. ukonga abasebenzi kunye nexesha,Ixabiso eliphantsi kodwa ivelise umgangatho ophezulu.Ingomatshini okhethayo okhethiweyo kwinkampani yokulungisa iifayibre.
Umatshini wokukhupha i-fiber jute wenziwe ikakhulu ngesakhelo, Izigubhu zedrum, iphepha elilelinye, umlomo owondlayo, ikhava yokhuseleko,imoto,ukutyisa roller,Ukukhuphela isithuthi esithutha izinto, njl .umatshini wokukhupha i-sisal fiber unokuqhutywa yimoto yombane okanye i-injini yedizili.Ukukhetheni kwamandla okwahlukileyo kunokuhlangabezana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo, ngakumbi indawo emfutshane kumandla ombane.
I-Sisal fiber yinto ebalulekileyo eluhlaza efunekayo ekuveliseni iimpahla ezahlukeneyo,ezinje ngee-doormats, ukuveliswa kwemveliso,Iintambo, iintambo kunye namanqaku ahlukeneyo, njengeebhegi zokuthenga, hanger edongeni hanger, imbiza yokubhaka, iitafile zeetafile, kunye nezinye iimpahla ezininzi.Ngezinsuku zakudala ,Ukutsalwa kwefibre ye-sisal kwenziwa ubukhulu becala ngenkqubo eyenziweyo. ayisiyomveliso ephantsi kuphela, kodwa futhi kwandise kakhulu umthwalo wokusebenza kwamafama.Ukusebenzisa umatshini wokuxobula i-jute fiber kungongeza imveliso enkulu kodwa kunciphise nomsebenzi ongumlimi.. Ukutsalwa kwefayibha kumatshini osisixhobo sokudibanisa nefibre kuyinto ephezulu kumgangatho xa kuthelekiswa nesicatshulwa esinefayile.
Umatshini waseVictor Fama obonelela ngohlobo olubalaseleyo loomatshini bokukhupha i-sisal fiber. Umatshini wokukhupha uVictor brand sisal uthunyelwe kwilizwe laseMelika, Japhan, Ekhuwado, Rhuwanda, Bhangladeshi, Khenya, Yuganda, Bhutan, Thekhi, IJiphutha njl.
Iiparamitha zobugcisa kumatshini we-sisal fiber extractor
150I-M2 / Iiyure